Xog: Hal arrin oo hoggaamisay guul-darradii Faroole ka raacday doorashadii shalay - Caasimada Online
Home Warar Xog: Hal arrin oo hoggaamisay guul-darradii Faroole ka raacday doorashadii shalay
Xog: Hal arrin oo hoggaamisay guul-darradii Faroole ka raacday doorashadii shalay
Muqdisho (Caasimada Online) – Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeydiid ayaa noqday guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii uu tartan uga adkaaday Senator Cabdiraxmaan Faroole, oo markii hore xilkan loo saadaalinayey.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan aqalka sare ayaa Caasimada Online u sheegay in guul-darrada Faroole ay ugu wacneyd cabsi laga qabayo fikirkiisa dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya, oo uu aamnisan yahay in wax laga beddelay.
Xubnaha Aqalka Sare ayaa u arkay in hadidi Faroole loo gacan geliyo hoggaanka guddiga dib u eegista dastuurka uu dowladda dhex joojin karo khilaaf aan dhammaan oo dastuuri ah, taais oo horseedi karta in afarta sano ee baarlamanka ay buuq ku dhammaato.
Waxaa sidoo kale jiray cabsi ku saabsan inuu is-beddel ku sameyn karo dastuurka.
Ayada oo laga duulayo arrimaha ayaa hoggaanka baarlamanka waxay maalmihii ugu dambeeyey galeen dadaal xooggan oo ka dhan ah inaan Faroole loo gacan gelin xilkan oo ah kan ugu sarreeya baarlamanka, marka laga soo tago guddoonka.
Faroole ayaa intii uu ahaa madaxweynaha Puntland ku doodi jiray, welina qaba in wax laga beddelay dastuurka dalka, inkasta oo aan caddeymo loo hayn.